Filtrer les éléments par date : vendredi, 13 décembre 2019
vendredi, 13 décembre 2019 19:39
Ambatondrazaka: Tapaka ny lalana eo amin'ny Kafe
Tapaka ny lalana eo amin'ny Kafe, lalana izay nampanantenain’ny Filoha Andry Rajoelina hamboarina ny 14 oktobra lasa teo. Mampiaka-peo ireo vahoaka fa tokony tsy mampanantena ny fitondram-panjakana rehefa tsy ho vita.
Mahatsiaro sahirana tanteraka ireo vahoaka ao amin'ny tapany avaratry ny Distrikan’Ambatondrazaka satria dia tsy maintsy miova fiara eo amin'ny Kafe raha te ho tonga any Ambatondrazaka.
Manomboka amin'ny 1 000 Ariary ny sara fampintana ny olona iray, ka hatramin'ny 15 000 Ariary, arakarakin'ny zavatra entin'ilay olona no mampiakatra io sarany io.
vendredi, 13 décembre 2019 19:23
Kidnapping: Lasibatra teny Soavimbahoaka i Navaze Veldjee
Nisy naka an-keriny teny Soavimbahoaka, ny marainan’ity zoma 13 desambra ity, i Navaze Veldjee. Nanamafy izany ny CFOIM (Collectif Français d'Origine Indienne de Madagascar).
Mpandraharaha, 47 taona, i Navage Veldjee. Izy no tompon’ny orinasa Veloptic. Karana mizaka ny zom-pirenena frantsay.
Fanindroany izao, tao anatin’ny roa taona, ity Karana ity, no nisy naka an-keriny. Efa lasibatry ny mpaka an-keriny ity ny harivan’ny 24 mey 2018, teny Ampasampito, raha iny hamonjy fodiana iny izy sy ny vadiny. Ny fiarany ihany no nitondran’ireo mpaka an-keriny azy mivady. Navotsotr’ireo teny an-dalana ilay ramatoa, fa i Navaze Veldjee no notanan’izy ireo tany. 15 andro taty aoriana vao navotsotr’ireo mpaka an-keriny, teny Ampasampito, i Navaze Veldjee.
vendredi, 13 décembre 2019 19:21
Alerte kidnapping Soavimbahoaka
Alerte kidnapping Soavimbahoaka.